တခုလပ် - Dr Mg Nyo [အပြာစာပေ]
“ဟေ့ကောင်… ဇော်ကြီး … အဲ့ဆော်… မိုက်တယ်နော်”
“အေး…ဟုတ်တယ်ကွ… နောက်ကကြည့်ရင် ပိုတောင်မိုက်သေးတယ်”
“အမလေးလေ ဘာတွေကြည့်ပြီး မိုက်နေရတာလည်း ဇော်ကြီး နဲ့ ကျော်မြင့် ရယ်…. နင်တို့လည်း ငမ်းစရာရှားလို့ ဒီလို တစ်ခုလပ်ကိုမှ ငမ်းရသလားဟဲ့”
“ဟင် တစ်ခုလပ် ဟုတ်လို့လား မတင်ထွေးရဲ့”
“အဟုတ်တော့…အဟုတ်… တစ်ခုလပ်တင်… ဘယ်ကမလဲ… ကလေးတစ်ယောက်လည်း ရှိသေး… သူ့သားလေးကလည်း အခြောက်လိုလေးလေ သားထူး ဆိုလား?”
“ဟာ ဒါဆို ပိုတောင်မိုက်သေးတယ်… အမေကော… သားကော ဟား…ဟား…ဟား…ဟား…”
“ဟဲ့ မိုက်မနေနဲ့ နင်တို့ သေသေချာချာကြည့် မိန်းမဖင်တွဲ… လင်မမြဲ တဲ့”
“ဟင်… မတင်ထွေးပြောတာ ဘာလဲဗျ”
“အော်…ဘာကမှာလဲ…ဟဲ့… အဲ့မိန်းမနောက်ပိုင်းကို သေသေချာချာ ကြည့်လေ ဖင်က အောက်တွဲကျနေတာ… မှတ်ထား မိန်းမ ဖင်တွဲကျနေရင် လင်မမြဲဘူးဟဲ့… စိတ်ကူးတွေ ယဉ်မနေနဲ့”
အလုပ်ကအပြန် ရပ်ကွက်ရဲ့ လူစည်းကားရာ စျေးဆိုင်တန်းလေးမှာ အိမ်အတွက် လိုအပ်တာလေးတွေ ဝင်ဝယ်နေတဲ့ ကေသွယ် တစ်ဖက်စျေးဆိုင် အတွင်းမှ ပြောနေသောကြသည်ကို ကြားလိုက်ရသော စကားလုံးတွေက နှမသားချင်း မစာမနာ သားသမီးချင်း ကိုယ်ချင်းမစာနာ မိန်းမသားချင်း မစာနာသော စကားလုံးတွေကြောင့် ကေသွယ် ထောင်းကနဲ ထွက်လာသော ဒေါသနှင့်အတူ ချာခနဲနောက်ပြန် လှည့်လိုက်ကာ
“ဟဲ့ တင်ထွေး နင်ဘာစကားပြောတာလဲ? ငါ့လက်ဝါးက ပါးမရွေးဘူးနော် ညည်း အသားလွတ် စော်ကားနေတာတွေ များနေပြီ”
ဒေါသနှင့်အတူ လူကပါ တစ်ဖက် ဆိုင်ခန်းဘက်ကို ရောက်သွားသည်။ ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ်သွားသောကြောင့် တချို့သော စျေးဝယ်သူတွေ ကွက်ကြည့် ကွက်ကြည့် လုပ်နေကြပြီး စပ်ဖြီးဖြီး သကောင့်သား နှစ်ကောင်က ကေသွယ့်ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကို စားမတက် ဝါးမတက် သေသေချာချာ ကြည့်နေကြလေသည်။
“ငါက ဘာပြောလို့လည်း အမှန်ပြောတာလေ ညည်းက အမှန်ပြောတော့ နာတယ်လား နာရင် လဲသေလိုက်”
ကေသွယ် ထိန်းမထားနိုင်တော့သည့် ဒေါသကို ထွက်ပေါက် ပေးလိုက်ချိန်မှာတော့
“ဟင်…! နင်…နင်ကငါ့ကို ပါးရိုက်တယ် ဟုတ်လား…?”
“အေးရိုက်တယ် လာလေ လာလိုက် ထပ်အရိုက်ခံခြင်ရင် ရှေ့တိုးလာခဲ့ ကောင်မ…. ကေသွယ်ကို ဘာမှတ်နေလဲ”
“ဟဲ့ သူတောင်းစားနှစ်ကောင် နင်တို့လည်း ကြပ်ကြပ်သတိထား နင်တို့ နှမတွေ အမေတွေလို ထင်ပြီး ငါ့ကို ပေါပေါလောလောအစားထဲက ထင်မနေနဲ့ သူတောင်းစားတွေ နင်တို့ကိုပါ ပါးရိုက်မှာ ငါ့ကို ဘာကောင်မ မှတ်နေလဲ”
လူတွေ ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ပိုဖြစ်ကာ ဆွဲသူကဆွဲ ကြည့်သူကကြည့် တီးတိုးပြောသူကပြောနှင့် စျေးဆိုင်တန်းလေးမှာ စည်ကားသွားရလေတော့သည်။
အိမ်ပြန်ရောက်ရောက်ခြင်း အမောမပြေနိုင် ကေသွယ့်ရဲ့ ဒေါသတွေက အလိပ်လိုက် ထွက်နေဆဲ။ ကံအကြောင်း မလှလို့ တစ်ခုလပ် ကလေး အမေ ဖြစ်နေရတာ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အထင်သေးရှုံ့ချခံရဖို့လား။ တစ်ခုလပ်ဖြစ်တာ ဘာဆန်းလဲ။ လင်နဲ့ကွဲတာ ဘာဆန်းလဲ။ ကိုယ့်အပေါ် မကောင်းတဲ့ယောကျာ်းကို ဖက်တွယ်ပြီး ဒုက္ခဆင်းရဲ မခံပဲ ပြတ်ပြတ်သားသား ကွဲလိုက်တာ ဘာဖြစ်လဲ။ ကိုယ့်ဝမ်းအတွက် ကိုယ့်ခြေတောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်တည်ရဲတာ အပြစ်ဖြစ်နေလား။ ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကေသွယ် အတော်လေး မွန်းကျပ်လှပြီ။ အခြေအနေ မပေးလို့သာ ဒီလိုနေရာမှာ နေနေရတာ။
အချိန်က ညနေစောင်းနေပြီ မကြာခင်မှာ အမှောင်ရောက်လာတော့မည်။ သားဖြစ်သူက ဘယ်သဝေထိုးနေတယ် မသိ အခုချိန်ထိ ပြန်ရောက်မလာသေး။ ဟူးးး ကေသွယ် ထမင်းစကားပွဲဝိုင်းမှာ ငူငူကြီးထိုင်ကာ သားပြန်အလာကို စောင့်နေလေသည်။
“ဟဲ့ ပြန်လာသေးတယ်နော်။ ဒါက ဘယ်သဝေထိုးနေရတာလဲ။ ငါက အလုပ်က ပြန်လာပြီး ချက်ဟယ်ပြုတ်ရယ်နဲ့ မောနေရတာ နင်ကတော့ သာသာယာယာ အလေလိုက်နေတယ် “
“အမေကလည်း အလေလိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ သား ပန်းသည် အဒေါ်ကြီးစံပါယ်စီဆီ သွားနေတာ။”
“မစံပါယ်စီ နင်က ဘာသွားလုပ်တာလဲ”
“ဟိုလေ ဟို ညဘက်ကိုလေ သား စံပါယ်ပန်း လိုက်ရောင်းမလို့ အဲ့ဒါ”
“ပန်းလိုက်ရောင်းမယ် ဟုတ်လား။ နင်စာတော့ မလုပ်ချင်ဘူး မဟုတ်တာကြ လုပ်ချင်တယ်”
“အမေရယ် သားကျောင်းစာ စိတ်မဝင်စားဘူးလေ။ ကျောင်းဆက်တက်နေလည် သားအောင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ အခုလည်း ဆယ်တန်းရောက်နေပြီပဲ။ သား လူ့အောက် မကျပါဘူး အမေရဲ့။ အမေ့ကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ကူရအောင် သားအလုပ်လုပ်ချင်တယ်။ အမေလည်း နည်းနည်း နားရတာပေါ့။ အကြွေးတွေလည်း မနည်း များနေပြီလေ အမေရဲ့။ အဘိုး မဆုံးခင်က အမေ ယူထားတာတွေက ဒီအိမ်ပါ ထိုးအပ်ရတော့မယ့် အခြေအနေ ဖြစ်နေပြီလေ။ အမေ သားတို့က သားအမိ နှစ်ယောက်တည်းလေ။ မရှိအတူ ရှိအတူပေါ့ သား အလုပ်လုပ်ပါရစေနော် အမေ။”
သားရဲ့ စကားတွေက ကေသွယ့်ကို နာကျင်စေသည်မှာ အမှန်ပင်။ သားတစ်ယောက်အတွက် မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ပေးဖို့ အမေတစ်ယောက်ရဲ့ ခွန်အားတွေ ကေသွယ့်မှာ အပြည့်ရှိပါတယ် ။ မရှိတာ ရှိတာထက် သားကို မပင်ပန်းစေချင်ဘူး။ အဖေမဲ့နေတဲ့ သားအတွက် ကေသွယ် တာဝန်ပိုကျေချင်မိတယ်။ လင်ပစ် တစ်ခုလပ်ဖြစ်မှ သားဖြစ်သူက ကျောင်းထွက် စျေးရောင်းရတယ်လို့တော့ ပတ်ဝန်းကျင်ပြောတာ မခံနိုင်ပါ။ ဒါ့ကြောင့်လည်း သားရဲ့ တောင်းဆိုမှုကို ကေသွယ် တင်းတင်းရင်းရင်း ငြင်းပယ်ခဲ့လေသည်။
“လုံးဝ မလုပ်ရဘူး သားထူး။ အမေ အခု အလုပ်လုပ်နေတယ်။ မင်းတစ်ယောက်အတွက်တော့ အမေကောင်းကောင်း ထားနိုင်တယ်။ နင့်အဖေ မရှိတဲ့ နောက်မှာ နင့်ကို လူတလုံး သူတလုံး ဖြစ်အောင် ထားဖို့ ငါ့မှာ တာဝန်ရှိတယ်။ နင့်ခေါင်းထဲက ပေါက်ကရ အတွေးတွေကို ထုတ်ပစ်။”
သားထူး ခေါင်းလေးငုံ့ကာ အမေ့ရဲ့ ဒေါသအောက်တွင် တုတ်တုတ်မျှမလှုပ်ဝံ့နေခဲ့။
အချိန်က တစ်ဖြည်းဖြည်း ကုန်လွယ်လာသည်။ သားထူးလည်း ဆယ်တန်းကျလို့ အမေ့ရဲ့ ဆူပူကျိန်းမောင်းမှုကို ခံရင်း နောက်တစ်နှစ် ဆက်မဖြေပဲ အလုပ်ထွက်လုပ်ဖို့ တိုက်ပွဲဝင်ရသည်။ ကေသွယ်လည်း သားဖြစ်သူကို ပြောမရတော့သည့်အဆုံး လက်လွတ်လိုက်ရလေတော့သည်။
ဒီအမေနဲ့ ဒီသား နှစ်ယောက်တည်းရှိတဲ့ ဒီကမ္ဘာမှာ အရာအားလုံးကို အံတုဖို့ ငွေကသာ အရှင်သခင်ဖြစ်နေလေတော့ အိမ်ပေါ်က ဆင်းမပေးရဖို့အရေး သားအမိနှစ်ဦး ဒိုးတူဘောင်ဖက် လုပ်ကိုင်ဖို့က လိုအပ်လာလေသည်။
ကေသွယ် လက်ရှိလုပ်နေသော အရောင်းဝန်ထမ်း အလုပ်ကို ထွက်လိုက်ပြီး စျေးရောင်းဖို့ စိတ်ကူးလိုက်လေသည်။ အိမ်ရှေ့လေးမှာပင် ထမင်းဆိုင်ဖွင့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်လေတော့သည်။ ကေသွယ်တို့ ရပ်ကွက်က လမ်းမတန်းနဲ့ ကျောချင်းကပ်ဆိုတော့ စည်ကားသည်။ ဒါ့ကြောင့် ထမင်းဆိုင်ဖွင့်တာ အလုပ်ဖြစ်မည်ဟု ကေသွယ် တွေးလိုက်မိသည်။ သားကတော့ ညဘက် စံပါယ်ပန်း လိုက်ရောင်းပြီး ရောင်းရငွေကို တပြားမကျန် ပြန်အပ်ကာ အမေ့ကို ကူဖေါ်လောက်ဖက် လုပ်ပေးရှာသည်။
သားထူး စံပါယ်ပန်းကုံးများအား အတွဲလိုက် သေသေချာချာလေး စုကိုင်လိုက်ပြီး စျေးရောင်းထွက်ရန် ပြင်ဆင်လိုက်ကာ
“အမေ သား စျေးရောင်းသွားပြီ”
“ဟဲ့ သား ဒီနေ့ မစောဘူးလား”
“နည်းနည်းစောတယ် အမေ VIP ရပ်ကွက်ထဲ သွားရောင်းမလို့ အဲ့ဘက်က သူဌေးတွေက အပြင်ထွက်တာ မဟုတ်ဘူးလေ။ အဲ့မှာဆို စျေးပိုရတယ် အမေရဲ့ ပြီးတော့မှ ဒီဘက်အခြမ်း ပြန်လာမှာ အဲ့ဒါကြောင့် နည်းနည်း စောသွားမလို့”
“အေးပါ ငါ့သားရယ် ဂရုစိုက်သွား “
ကေသွယ်ရဲ့ ထမင်းဆိုင်လေးက မထင်မှတ်ပဲ အရောင်းသွက်သည်။ ဟင်းချက်လက်ရာလေးလည်းကောင်းပြီး စေတနာ အပြည့်နဲ့ စားသုံးသူတွေကို ရောင်းချပေးလို့ထင်ပါ့။ နေရာ အကွက်အကွင်းကလည်း ကောင်း၍ ထင်ရသည် ရောင်းကောင်းသည်။ ဒါကိုပဲ မနာလို မရှုစိတ်ရှိသော တချို့သူတွေက ထင်ကြေး အမျိုးမျိုးပေးပြီး ကေသွယ့်ကို စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေခဲ့လေသည်။
“အမလေးအေ ရောင်းကောင်းတာလည်း မပြောနဲ့လေ ကြည့်ကြည့်လိုက် သူ့ဆိုင်မှာ ဝင်စားတာ ဘယ်လိုလူတွေလည်းလို့ ကားသမားတွေချည်းပဲလေ။ အဆာပြေပေါ့အေ။”
အနှောင့်အသွား မလွတ်သည့် စကားတွေကို ကြားရဖန်များလာတော့လည်း ကေသွယ် ဂရုပြုမနေပဲ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်သာ ဇောက်ချလုပ်နေမိတော့သည်။ တချို့သော ယောကျာ်းတွေကလည်း ကေသွယ်က တစ်ခုလပ် ဆိုတာသိလို့ သွေးတိုးစမ်းတဲ့ သဘောနဲ့ သားပြော မယားပြောလေးတွေလည်း အပြောခံရသည်က ရှိသေးသည်။ စျေးသည်ဆိုတာ သည်းခံရတယ် ဆိုသည့် စကားအတိုင်း ကေသွယ် သည်းခံခဲ့သည်။
“ကေသွယ် အစ်ကို ဆာလာတယ် အဆင်သင့် ဖြစ်ပြီလား”
“အာ ကိုဝေမိုးကလည်း အဆင်သင့်ပါရှင် ဒါနဲ့ ကားဆွဲကောင်းလား ဒီနေ့”
“ဆွဲကောင်းပါ့ ဒါပေမယ့် မောတယ် ကေသွယ်လေးနဲ့ တွေ့မှ အမောပြေတယ်”
“ဟွန်း အပြောကောင်း ကိုတက်ပါ့ကြီး ခါတိုင်းလိုပဲ ဝက်သားနဲ့ပဲနော်”
“အွန်း အဆီတစ်ထပ် အသားတစ်ထပ် သုံးထပ်သားလေး”
ကားသမား မိုးဝေက ပြောလည်းပြော အကြည့်တွေက ကေသွယ်ရဲ့ ကိုယ်လုံးတစ်ခုလုံးကို သိမ်းကြုံးပြီးကြည့်ကာ တံတွေးတွေကို မျိချလိုက်သည်။
စီးပွားရေးအရလို့ ဆိုဆို မိန်းမသားတစ်ဦးတည်းရှာဖွေလုပ်ကိုင် စားသောက်နေရသည့် အချိန်တွင် အားကိုးစရာပဲဖြစ်ဖြစ် အဟန့်အတားပဲဖြစ်ဖြစ် ကေသွယ် လိုအပ်သည်ဟု ထင်မိသည်။ သားဖြစ်သူက အားကိုးရလောက်သည့် အခြေနေမျိုးဖြင့် သူမကို စောင့်ရှောက်ပေးမှု မရသေးသောကြောင့် အသက် ၃၇ နှစ် အရွယ်သာ ရှိသေးသော လုံးကြီးပေါက်လှ တစ်ခုလပ်မလေး ကေသွယ် အားကိုးရှာချင်မိလေသည်။
မပြည့်စုံရသည့်အထဲ ပတ်ဝန်းကျင် ကျားမုဆိုးတွေရန်က ရှိသေးသောကြောင့် တစ်ယောက်ယောက်ကို အတည်အကျ ယူလိုက်ရင်ဖြင့် တည်တည်တံတံများဖြစ်သွားမလားဆိုသည့် အတွေးက ဝင်လာသောကြောင့်လည်း ကားသမား မိုးဝေကို ကေသွယ် ထည့်သွင်း စဉ်းစားခဲ့လေသည်။
“အမေရယ် ဒီအတိုင်းလေးလည်း သားတို့ သားအမိအဆင်ပြေနေတာပဲဟာ။ ပြီးတော့ အကြွေးတွေလည်း အတော်လေး ကျေနေပြီပဲ ။ သားတို့အတွက်ပူစရာ ဘာရှိနေလို့ အမေက နောက်ယောကျာ်းယူရတာလဲ။ ပြီးတော့ သားက ငယ်တော့တာ မဟုတ်ဘူးလေ။ ရှက်တယ် ဗျ”
“ဟဲ့ ရှက်ရအောင် ငါက သူများလင်ကို လုနေတာမှမဟုတ်တာ ။ အခုဟာက ရှေ့ရေးကိုတွေးပြီး ငါလည်း စီစဉ်ရတာ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အမေ့မှာ အားကိုးအားထားစရာ ယောကျာ်းသားတစ်ယောက်တော့ ရှိသင့်တယ်လေ သားရဲ့။”
သားဖြစ်သူ လက်ခံလာအောင် ကေသွယ် တစ်ယောက် ချော့ကာ ခြောက်ကာ ပြောဆိုနေသော်လည်း သားထူးရဲ့ စိတ်ထဲမှာတော့ အမေ့ကို မငြိုငြင်ရက်သော်လည်း သဘောမတွေ့ကာ အလိုမကျ ဖြစ်ရလေသည်။
ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ သားထူး ပို၍ပင် အရှက်သည်းခဲ့ရလေသည်။ မလိုသူတွေရဲ့ ထိုးနှက်လာသောစကားလုံးတွေက သားထူးရဲ့ ခံစားချက်တွေကို အထပ်ထပ် နာကျင်စေခဲ့သည်။
“ပြောသားပဲအေ ဒီလိုပဲ ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ။ ဒီလောက် တရုန်းရုန်းနဲ့ တော်သလင်း ဇာတ်ခင်းနေမှတော့ ဟိုကားသမား မိုးဝေကလည်း နွားပဲနေမှာပါအေ။ “
“ဟဲ့ မဖြစ်နိုင်ဘူး ကားသမားဆိုမှတော့ လူလည်ပဲနေမှာပါအေ။ မိကေသွယ်က တခုလပ်ဆိုပေမယ့် ရုပ်ရည်လေးက ရှိသေးတယ်လေ ပြီးတော့ ရှာနိုင်ဖွေနိုင်တယ်။ “
“အွန်း ဒါနဲ့ သူ့သား သားထူးကလည်း ဘာထူးလည်း မအေ ခြေရာနင်းတာပဲ လူကပျော့စိပျော့ဖတ် အခြောက် ဖြစ်နေတော့ ညဘက်ဆို ပန်းရောင်းရင်း အမလေးအေ ပြောကိုမပြောချင်ပါဘူး ကာလသားတစ်သိုက်နဲ့ တရုန်းရုန်းပါပဲအေ။”
“အေးဟယ် စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတယ် အရပ်နာတယ်”
သားထူး နားနဲ့ဆက်ဆက် ကြားနေရသည်ကို မယုံနိုင်အောင် ဖြစ်ရလေသည်။ ကိုယ်တွေသားအမိအပေါ် ဒီလောက် ပြောနေရအောင် သားထူးတို့သားအမိ ဒီပတ်ဝန်းကျင် ဒီအသိုင်းအဝိုင်းအပေါ် ဘာမှ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ ဘာလို့ မြေနိမ့်ရာ လှံစိုက်ချင်ကြတာလဲ။ ဒီလို လူ့အသိုင်းအဝိုင်းကြားမှာ အမေ ဘယ်လိုရပ်တည်မလဲ။ အတွေးတွေက သားထူးကို ပိုလို့ပင် မွန်းကျပ်စေခဲ့လေသည်။
ပန်းရောင်းပြီး ပြန်ရောက်တော့ အခါတိုင်းလို အမေက ထမင်းဝိုင်းပြင်ပြီး စောင့်မနေခဲ့ပေ။ တိတ်တဆိတ် အိမ်ပေါ် ခြေလှမ်းတက်လာပြီး အမေ့ကို အိမ်ရှေ့မှာ မတွေ့ရသောကြောင့် သားထူး ခေါ်မည်အပြု
“ဟွန်း ကိုမိုးဝေကလည်း ဇွတ်ပဲ ခဏနေဦး တော်ကြာ သားပြန်လာတော့မှာ “
ထရံတစ်ချက်သာခြားသော အိပ်ခန်းအတွင်းမှ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ အသံတွေက သားထူးကို အိမ်အပြင် ပြန်ထွက်သွားဖို့ တွန်းအားပေးလိုက်သယောင်။ ချက်ခြင်းပင် သားထူးအိမ်ထဲမှ ထွက်ခဲ့လေသည်။ ရှက်ခြင်း နာကျင်ခြင်းတွေကို ထွေးပိုက်ပြီး ဦးတည်ချက်မဲ့စွာ လျှောက်လာခဲ့ရင်း
“ဟေ့ ပန်းသည်လေးပါလား ပန်းတွေ ကုန်သွားပြီလား”
နည်းနည်းထွေနေသော ကောင်းကောင်းတို့ သူငယ်ချင်းတစ်ဖွဲ့နှင့် ပက်ပင်းတိုးလေပြီ။
“ဟေ့ မေးနေတယ်လေ လာကွာ ငါတို့နဲ့ လိုက်ခဲ့ မင်းပန်းတွေလည်း ကုန်နေပြီပဲ။”
“ဟ့ မလိုက်လို့ ရမလားကွ ငါတို့ပျော်အောင် လုပ်ပေးကွာ ဟေ့ကောင်တွေ သဘောတူလား”
“ကြာသလားလို့ ဒါမျိုးလည်း ငါတို့က မရှောင်ဘူးကွာ “
“ကောင်းကောင်း ငါတောင်းပန်ပါတယ်ကွာ ငါ ငါ မလိုက်ပါရစေနဲ့”
“မူမနေပါနဲ့ကွာ မင်းဒီအချိန် အပြင်မှာ ရှိနေတာ ဘာအတွက်လည်း ငါတို့ သဘောပေါက်ပါတယ် ။ မင်းဆန္ဒတွေ ဖြည့်ပေးမယ် လာလိုက်ခဲ့”
သားထူး ခေါင်းထဲ ထွေသွားသည်။ ငိုချင်လာသည်။ အမေ့ကို နာကျည်းလာသည်။ ဒီလို ဖြစ်ရပ်တွေအတွက် ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိသလဲလို့ သားထူးအော်ဟစ် မေးမြန်းလိုက်ချင်သည်။ တရွတ်တိုက် ဆွဲခေါ်သွားသော ကောင်းကောင်းတို့ အဖွဲ့နဲ့ သားထူး ပါလာခဲ့ရသည်။
မျက်ရည်တွေ နာကျင်မှုတွေနဲ့ လူတစ်စုရဲ့ အာသာဆန္ဒကို ပေးဆပ်လိုက်ရသည်။
လေးလဆိုသော အချိန်အတွင်းမှာပင် အခြေအနေ တစ်ခုက ပြောင်းလဲသွားခဲ့လေတော့သည်။ အမေ့နောက်ယောကျာ်း မိုးဝေဆိုသော ကားသမားက နောက်ထပ် မယားငယ်ယူပြီး အမေ့ရဲ့ ရှိစုမဲ့စုလေးများကိုပါ မသွားသောကြောင့် အမေ့ မျက်ရည်တွေကို သားထူး တွေ့ရပြန်ပေသည်။
“သားရယ် ရှက်လွန်းလို့ပါ။ အစကတည်းက လူတွေက အမေတို့ဆို ပြောချင်ဆိုချင်နေကြတာ။ ခုလိုသာဖြစ်တာ သိကြည့် အမေတော့ ရှက်တာပဲသိတယ် သားရယ်။”
“ရှက်မနေပါနဲ့ အမေရယ် ပတ်ဝန်းကျင်က သားတို့ကို ထမင်းလာကျွေးတာမှ မဟုတ်တာ။ ပြီးတော့ အမေ ဖောက်ပြန်လို့ အမေ တစ်ခုလပ် ဘဝကနေ နှစ်ခုလပ် ဖြစ်ရတာမှ မဟုတ်ပဲ”
သားအမိနှစ်ယောက် ဖတ်ပြီးငိုကြွေးရင်း အနာဂါတ်အတွက် ရင်မောနေကြရလေသည်။
“အမလေးလေး သိပြီးသား ငါပြောသားပဲ မိန်းမဖင်တွဲ လင်မမြဲလို့ ခုကြည့် ထားသွားပြန်ပြီ နောက်တစ်ယောက်က။ ဟွန်း ဟွန်း ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရာထူးတိုးတာပေါ့အေ။ တစ်ခုလပ် မဟုတ်တော့ဘူး နှစ်ခုလပ် ဟားဟားဟား”
ဒီအဖြစ်ပျက်တွေရဲ့ အကျိုးဆက်ကတော့ သားထူးတို့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ မနေဝံ့တော့တဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ရလေသည်။ ဒါ့ကြောင့်ပဲ အိမ်ကိုရောင်းပြီး အခြားမြို့နယ်တစ်ခုသို့ အခြေချရန် အပြီးထွက်ခဲ့လေသည်။
“မကေသွယ်ရဲ့ သားလေးက နွဲ့နွဲ့လေးနော်”
“ဟုတ်တယ် သားက မိန်းမလျာလေ”
“ဟင်းဟင်း အံ့သြသွားတာလား မမြရီရဲ့။ တစ်ကယ်တော့ သားယောကျာ်းလေး မွေးထားတာပဲ ကျားကျားယားယား ရှိစေခြင်ခဲ့တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ သား အရွယ်ရောက်လာတော့ ခုလို နွဲ့နွဲ့လေးနဲ့ မိန်းမစိတ်ပေါက်နေတာကိုပဲ ကျွန်မ ကျေနပ်နေမိတယ်။”
“ဟင် ဘာ ဘာဖြစ်လို့လဲ မကေသွယ်ရဲ့”
“အော် ယောကျာ်းစိတ်နဲ့ ယောကျာ်းလိုနေရင်း မိန်းကလေးတွေအတွက် အဆိပ်အတောက် ဖြစ်စေမယ့် ယောကျာ်း ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် ခုလို မိန်းမလျာ ဖြစ်နေတာကမှ ပိုပြီး တန်ဖိုးရှိသေးတယ်လို့ တွေးမိလို့ပါ။ တစ်ကယ်တော့ သားကို ကျွန်မ သိပ်ကိုယောကျာ်းပီသစေချင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယောကျာ်းဆန်လွန်းတဲ့ ယောကျာ်းတော့ မဖြစ်စေချင်ဘူး။ တစ်ခုလပ်မ တစ်ယောက်ရဲ့ သားက သူ့အဖေရဲ့သွေးလို မိန်းမတစ်ယောက်အပေါ် တာဝန်မကျေဘူးဆိုရင် ယောကျာ်းပီသတယ်လို့ ဘယ်လိုသမုတ်မလဲ။ ခုဆို ကျွန်မ သားအတွက် မပူရဘူး။ သားမှာ မိန်းကလေးတွေအပေါ် နာကျင်စေမယ့် ကြမ်းတမ်းတဲ့ အကျင့်စရိုက်လည်းမရှိဘူး။ သူနေနေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို မူးရူးပြီး ဆဲဆိုနေခြင်းလည်း မရှိဘူး။ သူ့ကြောင့် ကျွန်မ ရုံးတွေ ဂတ်တွေမှာလည်း လိုက်ဖြေရှင်းရတာမျိုးလည်း ရှိဘူး။ ကျွန်မက သားမွေးပြီး သမီးရထားတာလို့ တွေးပြီး ကျေနပ်တယ်။”
ဒေါ်ကေသွယ် နာကျင်မှုတွေ ပူဆွေးမှုတွေကို ဝေ့သီလာသော မျက်ရည်စတွေနှင့်အတူ ပုတ်ခတ်ထုတ်လိုက်ပြီး အလှပြင်ဆိုင်မှ ပြန်လာသည့် သားဖြစ်သူကို ထမင်းဝိုင်းပြင်ကာ ထိုင်စောင့်နေလေတော့သည်။
ဖတ်ရှုကြိမ် စုစုပေါင်း : 9,516